အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (အတိုကောက် နပခ) သည် အမ်းမြို့အခြေစိုက် တပ်မတော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက တာဝန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ် တောင်ဘက်ရှိ ဒေသများနှင့် ၎င်းနှင့်ထိစပ်နေသော နေရာဒေသများ၏ ကာကွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည်။ ထို့ပြင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေအတွင်းရှိ ၎င်း၏လက်အောက်ခံ တပ်များနှင့် အခြားလက်ရုံး/ဝန်ထမ်းတပ်များ၏ စစ်ဦးစီး/ စစ်ရေး/ စစ်ထောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိုပါ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် အထက်ဌာနများမှ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား ထပ်ဆင့် ညွှန်ကြားပေးခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်းတို့ကိုပါ ဆောင်ရွက်ရသည်။ လက်ရှိ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူမှာ ကြည်း ၂၅၀၉၉၊ ဗိုလ်ချုပ် ထင်လတ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် ယခင်က တပ်မတော်၏ ထိပ်တန်းကျောင်းကြီးဖြစ်သော စစ်တက္ကသိုလ် ၏ ကျောင်းအုပ်ကြီးလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
၃ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိ စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်များ
၄ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများ
အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၌ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ကို ရခိုင်ပြည်နယ်၊ အမ်းမြို့ သို့ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကွပ်ကဲမှုနယ်မြေများမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံပိုင် ရေပိုင်နက်များ အထိ ပါဝင်သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်] လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့များကို ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့တွင် ဖြန့်ခွဲထားရှိသည်။
ပထမဆုံးတိုင်းမှူးအဖြစ် ကြည်း-၅၄၉၇၊ ဗိုလ်မှူးကြီးလှထွန်း(ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအပတ်စဉ်-၁)မှ တာဝန်ယူခဲ့သည်။
(ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် ၆ခု. ခြေလျင် ခြေမြန် ၄၃ခု. လက်ရုံးဝန်ထမ်း ၂၆ခု. ကက(ရေ) ၁၂ခု. စုစုပေါင်း ၈၇တပ် အကြမ်းဖျင်းအနည်းဆုံးရှိသည်။)
နပခ နယ်မြေအတွင်း တည်ရှိသော စစ်ဌာနချုပ်များ၊ ၎င်း၏ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ စစ်ဌာနချုပ်၊ စစ်ဗျူဟာများနှင့် လက်အောက်ခံ ခြေလျင်/ခြေမြန်တပ်ရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ် (စစ်တွေ)
အခြေချစစ်ဗျူဟာ (၂) ခု၊ လှုပ်ရှားစစ်ဗျူဟာ (၂) ခု နှင့် ခြေလျင်/ခြေမြန်တပ်ရင်း (ဒကစ-စစ်တွေလက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများအပါအဝင်) ရှိသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - အမှတ်(၅)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - အမှတ်(၉)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - အမှတ်(၁၅)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်
↑ "အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ များအား ကျောင်းဝတ်စုံနှင့် စာရေးကိရိယာများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ပွဲပြုလုပ်"။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်&oldid=735063" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၄:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။